Umhambisi wethu oKhethekileyo eTurkey ngomatshini wethu wokususa iinwele zeLaser
Siyavuyisana nentsebenziswano yethu nomthengisi wethu okhethekileyo waseTurkey ngomatshini wethu wokususa iinwele ukusuka ngomhla we-10, Okthobha 2018 ukuya kwi-10, Okthobha 2022! Kubathengi be-Iran abanomdla kumatshini wethu wokususa iinwele we-laser, nceda unxibelelane nomthengisi wethu okhethekileyo wase-Iran. ...
1: i-freckle Igama: Iminyaka: 21. Umsebenzi: Uphawu lomfundi: Lubonakala ngombala omdaka okanye umbala omdaka ngombala omnyama, osisangqa, okweqanda okanye ongaqhelekanga. Umda ucacile, ububanzi bu malunga ne-2mm, umphezulu ugudile, ubodwa kwaye awudityaniswanga, kwaye ukuhanjiswa kwahlukile. Ukuxilongwa: i-frec ...
Imiboniso yeSano Laser
Inkampani ye-Sano Laser iyaya eDubai, eSpain, e-Itali, eTurkey, ePoland, naseRomania kwimiboniso minyaka le. Lo ngumfanekiso xa sisiya e-India Exhibition. I-India yeyona ntengiso iphambili kwinkampani yethu. Sinosasazi oluninzi eIndiya. Kwaye siza eIndiya 3-4 amaxesha kanye ngonyaka. In Turkey mboniso, diode ...
Umatshini wokuthengisa oshushu we-1 ngo-2020 -Imagshape HIFEM EM-sculpt umatshini wolwakhiwo lwezihlunu
Umatshini wokwakha izihlunu waseMagshape HIFEM EM ngowona mshini uphezulu wokuthengisa kwinkampani yam kwi2020. Itekhnoloji entsha, kodwa kushushu ukuthengisa ngoku! IMagshape sisixhobo esisebenzayo semilo kunye nesixhobo sokwakha izihlunu. Kufanelekile ukuba unciphise, ekubumbeni, gaini ...
Ubuhle be-CO2 Laser, Ukususwa kwamabala amabala, Shr IPL Khetha, Shr Opt Ipl Ukususwa kweenwele, Umatshini weLaser we-Co2, Umatshini wokukhuthaza izihlunu ze-Ems,